Tsy misy sori-dalana sy paikady ary tanjona mazava intsony ny fitantanana ny firenena fa mandeha ho azy.
Mbola minia be hampom-po sy midingin-drambo ho mahavita azy ny fanjakana Rajaonarimampianina. Potika sy rotiky ny fahantrana lalina ny vahoaka Malagasy, saingy voadainga no foto-tsakafony avy any amin’ny mpitondra, hoy ilay mpanakanto iray. Hampanantenaina fiadanana lava izao saingy hevitra misavoamboana sy fampandriana adrisa ary vahaolana tandrametaka no misy fa izay tena hamaha ny olana dia lavitry ny kitay ny afo. Ny vahoaka indray aza no omena tsiny manoloana ny fahalemen’ny fanjakana sy ny tsy fahaizana tsotr’izao. Aiza tokoa moa no ahitana fahombiazana raha ny olona heverina ho lehibe sy mendrika hololohavina eto amin’ny firenena no mbola mirehareha amin’ny sezany sy ny toerany na dia efa fanta-poko fanta-pirenena fa tompondakan’ny fanodinkondinana volam-bahoaka ? Ireo antenaina mba hisolotena ny maro voavidiny, ka mangina sy mbola midokadoka sy misolelaka no anton-draharaha sitrany ahay mba mahazo tombontsoa, ka na hivarontan-tena sy hananan-tsiny amin’ny vahoaka aza tsy olana. Lasa tarigetra ny hoe aleo halam-bahoaka, toy izay halan’andriana.